Dhaqdhaqaaqa Banaan-bax ka Dhan Ah Maamulka Farmaajo Oo ka Socda Magaalada Muqdisho | Marsa News
Dhaqdhaqaaqa Banaan-bax ka Dhan Ah Maamulka Farmaajo Oo ka Socda Magaalada Muqdisho
Hargeisa:(Marsanews) 24-kii Saacadoo ee ugu dambeyay waxaa xaafadaha qaar magaalada Muqdisho laga dareemayaa abaabulka Banaanbax looga soo horjeedo maamulka farmaajo, kaas oo ku aadan go’aankii muddada saacadaha ah lagu xanibay Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo xiligaa ku wajahnaa Beladweyne.
Sidoo kale abaabulka ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa baraha bulshadu ku kulmaan ee Internet-ka oo dad lala wadaagay.
Qaar ka mid ah dhalinyarada wada qaban qaabada banaan baxan ayaa sheegay in aanay jirin cid gaara oo loo xil saaray isku xidhka abaabulka mudahraadkan balse uu ku bilaawday uun hadal heyn iyo dareen dadka qaar ay ka qaateen khatartii halista badnayd ee xukuumada farmaajo ay gelisay Shariif iyo Xasan Sheekh.
Dhalinyaradaan ayaa sheegay sidii ay dareenkooda si nabad gelyo ah ugu muujin lahaayeen, islamarkaana ay isugu soo baxaan laga bilaabo Liido ilaa KM 4 magaalada Muqdisho.
Lama saadaalin karo khatar iyo xaalado abni daro inay ka dhalan karto isu soo baxan ay dhalinyaradu hor kacayso islamarkaana ku taageerayso labada madaxwayne ee shariif iyo xasan sheekh, inkastoo ay jirto aragtiyo odhanaysa in maamulka farmaajo uu ku hawlan yahay sidii xoog loogu muquunin lahaa dhalin yaradaasi oo ciidamo looga horgayn lahaa, taasi oo ay ka dhalan karto gadood iyo kacdoon shacab oo xoog badani